फोहोरको डंगुरमा फालेको बालक, जसको बाबू बने शिशिर ! [भिडियो हेर्नुहोस]
फोहोरको डंगुरमा फालेको बालक, जसको बाबू बने शिशिर ! [भिडियो]
यसैबिच कलाकार, कार्यक्रम प्रस्तोता तथा पछिल्लो समय सामाजिक काम गरेर सबैको मनको ढुकढुकी बनेका शिशिर भण्डारीले डस्टबिनमा भेटिएका बाबुको जिम्मा लिएका छन् । भविष्यलाई काखमा लिदै मायाले चुम्बन गर्दै भावुक बनेर शिशिर भण्डारीले यस्तो गरे । भिडियो हेर्नुस ।